Ny Fikarakarana ny Hanina Amin’ilay Fetin’ny Sambo Dragona Sy Ry Nenitoa Mpanao Azy ireny · Global Voices teny Malagasy
Ny Fikarakarana ny Hanina Amin'ilay Fetin'ny Sambo Dragona Sy Ry Nenitoa Mpanao Azy ireny
Voadika ny 15 Jolay 2016 7:57 GMT
Maneho ny fomba nentim-paharazana hamatorana ny vongambary bah tsang Taiwaney ho an'ny Fetin'ny Sambo Dragona i Eva Chou. ”Nenitoan”ny bah tsang izy, manampahaizana amin'ny fanamboarana ilay sakafo matsiro tian'ny olona indrindra — izay tsy fantatr'ireo Taiwaney teraka Amerikana ny fanamboarana azy. Sary: Grace Hwang Lynch
Ity lahatsoratra nosoratan'i Grace Hwang Lynch ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org ny 9 Jona, 2016, ary navoaka teto tao anatina fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Any an-tranony any San Jose, Kalifornia, no mamoritra, manesika ary mamatotra fonosana ravina bararatabe 10 ao anatin'ny 20 minitra latsaka i Eva Chou, 66 taona, ary mandrotsaka ny fehezana bolabola ao anaty rano mangotraka. Zatra mitantana trano fisakafoanana Shinoa izy ary niteny fa ny ambony indrindra tamin'ny fahombiazany, 10 na 15 taona lasa izay, dia nahavita 2.000 tamin'ireo sakafo masira ireo izy isan-taona.
”Nividy trano fisakafoanana Shinoa aho fony tonga taty Amerika tany amin'ny taona 1990 tany,” hoy i Chou. ”44 taona aho raha nampianarin'ny rahavaviko ny fanamboarana bah tsang.”
Efa niala tamin'ny fitantanana trano fisakafoanana izy izao ary tsy manao afa-tsy bolabola am-polony isan-taona, indrindra ho an'ny fianakaviany. Ireo zanany telo lahyefa lehibe, hoy izy, dia tsy liana amin'ny fianarana ilay fomba nentim-paharazana.
Afaka mahita ireo vongam-bary fonosina ravina ianao — zhong zi amin'ny teny Mandarina ary bah tsang amin'ny Taiwaney — any amin'ireo trano fihinanana dim sum (ampahan-tsakafo nentim-paharazana Shinoa) na ireo tsiro Aziatika, saiky amin'ny fotoana rehetra, fa be atao kokoa amin'ny famonosana sy fandrahoana ireo mpahandro amin'ity volana ity noho ny Fetin'ny Sambo Dragona, Duan Wu amin'ny teny Mandarina. Mitantara ny angano fa taorian'ny nitsorahan'ilay poety Shinoa vaky fo Qu Yuan tany anaty renirano, dia nanipy ravina feno vary tao anaty rano ireo namana sy havana mba hampanalavirana ireo trondro noana tsy hihinana ny vatamangatsiakany nandritra ny fikarohana nataon'ireo sambo nalefa hitady azy. Nifanandrify tamin'ny fankalazana ny fiverenan'ny hafanana ary nilatsaka ny 9 Jona ny andro tsy fiasana tamin'ity taona ity.
Julie Yu avy ao Mipitas mampiseho ny fomba hampifanaingenanana ireo ravina bararatabe mba hanamboarana bah tsang, vongabary Taiwaney, ho an'ny Fetin'ny Sambo Dragona.
Raha nalaza manerana Shina sy teo anivon'ireo Shinoa am-pielezana ao Azia Atsimo Atsinanana ny ravina bararatabe mamono ireo vongambary, ireo fonosana miendrika telozoro dia nasandratra ho kisarim-pirenena ao Taiwan, izay fampahatsiahivana ireo fotoana tsotra fambolen'ny nosy tany taloha. Lohahevitry ny hira Folk iray hirain'ireo mpivarotra an-dalambe ny Bah tsang ary ahitana lamba kely fikarakarana vongambary eny amin'ireo fivarotana fahatsiarovana.
Fa maro amin'ireo Taiwaney Amerikana teraka tany Etazonia no miteny fa tsy manana hevitra mihitsy mikasika ny fanaovana izany bah tsang izany. Tsotra ny famenoana azy — vary madity, kisoa natono, holatra shiitake, ”échalotes”, voanjo na atody nahandroina — fa ny fomba famonosana no sarotra. Tokony hifanaingina moramora ireo ravina bararatabe, dia avy eo aolana mba hahazoana endrika kaopy. Ny vary sy ireo famenony hafa dia aorona moramora ao anatiny ary avy eo dia aforitra ary fatorana tsara hikatona amin'ny kofehy ireo ravina.
Mameno ny ravina bararatabe amina fangarony tsotra i Yu. Matetika vita amin'ny vary madity, kisoa voatono, holatra shiitake, ‘ échalotes’ ary indraindray voanjo na atody nahandroina.
”Noho ny fihazakazaky ny fandehan'ny fiainana, miha betsaka ireo tanora no misafidy ny hividy any an-tsena,” hoy i Patricia Cheng, mpitondra tenin'ny rojon-tsena 99 Ranch Market, izay mitatitra ireo vongambary mangatsiaka vokarin'ny orinasa ao Shina na Taiwan, ary koa vongambary vao vita avy eo an-databatra deli feno entona mafana, mandritra ny telo herinandro mialoha ilay Fetiben'i Duan Wu.
Nefa betsaka ireo Taiwaney Amerikana no miantehitra amin'ny tsiro namboarina tao an-trano avy amin'ireo ”nenitoa” — ireo mpivarotra izay mivarotra bah tsang amin'ny alalan'ny tambajotra tsy ara-dalàna. Tsy kisendrasendra ny hoe voadika ho ”koba Taiwaney” ny bah tsang — mivezivezy eo amin'ireo Taiwaney sy Shinoa Amerikana amin'ny fomba mitovy amin'ny fomba hivarotana ny koba any amin'ireo fiarahamonina Latina izy ireny.
Ireo mpifindra monina, matetika vehivavy eo amin'ny faha 50 na 60 ny taonany miaraka amina fahaizana Anglisy voafetra dia mety hangataka amin'ireo namany mpiara-miasa aminy any anivon'ireo orinasa teknolojia avolenta, sekoly mampiasa ny teny Shinoa na vondrom-piarahamonina hafa, mba handefa famandrihana (commandes) .
Tsy manam-potoana [hanaovana bah tsang] ny zanako vavy,” hoy i Yu, avy ao Milpitas, Kalif. ”Mipetraka any Wisconsin izy ary ny vadiny dia Noverziana, noho izany mihinana amin'ny fomba Tandrefana ry zareo.”
”Indraindray misy mpitantana te-hivarotra azy ireny mba ahazoana vola amboniny,” hoy i Jonathan Lee mpisehatra amin'ny toekarena bah tsang ao amin'ny biraon'ilay orinasa iray tantaninà Taiwaney ao New Jersey izay niasany. ”Isan-kerinandro, mandefa taratasy fisoratana anarana ry zareo.” Miteny i Lee fa na dia any Taiwan aza, dia betsaka ireo fianakaviana an-drenivohitra no tsy manamboatra ny bah tsang ho azy ireo manokana. Zavatra mahazatra kokoa izy io any amin'ny fiarahamonina ambanivohitra any amin'ny faritra atsimon'ny nosy.
Ireo mpahandro hafa any an-trano dia mampiasa vondrona Facebook miafina izay hizaràny ny sarin'ireo sakafo miaraka amin'ny lisitry ny vidiny ary torohay momba ny fanaterana. Fa ireo mpivarotra bah tsang malaza izay nifandray tamiko dia nandà ny hivarotra azy ireo na ny hohadihadiana mikasika ny fandraharahana ataony.
”Ny tombatombako dia ny hoe manahy momba ny hetran'ny vola miditra na ny fitsipiky ny ministeran'ny fahasalamana ry zareo,” hoy i Pam Tsai, filohan'ny East Bay Taiwanese Association, vondrona mponina ao San Fracisco Bay Area.
Mamatotra kofehy manodidina ny bah tsang iray fehezana i Yu. Efa niala tamin'ny fitantanana trano fisakafoanana izy izao ary tsy manao afa-tsy vongambary am-polony isan-taona, indrindra ho an'ny fianakaviany.
Taloha, ireo fikambanana toy ny azy dia nampiantrano ny fetin'ny bah tsang, izay toerana nampianaran'ireo mpifindra monina be taona ny fomba hatrizay ho amin'ireo tanora teraka Amerikana mpikambana ao amin'ny fiarahamonina. Fa nihena ny fahalianana amin'ilay hetsika, noho izany najanona ny fandaharana, hoy i Tsai.
”Tsy manam-potoana ny zanako vavy”, hoy i Julie Yu avy ao Milpitas, Kalifornia. ”Mipetraka any Wisconsin izy ary ny vadiny dia Norveziana, noho izany mihina amin'ny fomba Tandrefana ry zareo.”
Yu, 75 taona, dia nipetraka tao Etazonia nanomboka ny taona 1979 ary te-hitahiry ny rafitra ara-kolotsainan'ny bah tsang, na izany aza. Nampidiriny tao anatin'izany ny torolalana amin'ny antsipirihany momba ny fomba fanaovana ireo vongambary amin'ny Fomba Fahandro Taiwanezy, izay nozarain'ny Fikambanam-Behivavy Taiwanezy Amerikana Tavaratra tamin'ny 2013. Tahaka ny bokin-tsakafon'ny fiangonana, ilay boky nakambana tamin'ny olilolika (spirale) dia ahitana ireo fomba fahandrom-pianakaviana avy amin'ireo vehivavy toa an'i Yu miaraka amin'ny sarin'ireo sakafo efa vita.
Natsangan'i Ho Chie Tsai, 44 taona, ny tranonkala TaiwaneseAmerican.org, izay manasongadina lahatsoratra mikasika ny hetsika ara-kolotsaina sy ny Taiwanezy malaza ao Etazonia. Na dia tsy manao bah tsang aza izy. Saingy tsy hoe tsy miraharaha ny fombandrazana izy. Iray amin'ny fanomezana malaza homen'ireo malala-tanana ho an'ilay tranonkala dia ny T-shirt izay manasongadina ny sarin'ilay amboara malaza eo ambonin'ny teny hoe ”fonosy, maso amin'ny entona, arosoy.”
Ho an'i Tsai, ny fihinanana vongambary voafono ao anaty ravim-bararatabe dia manampy azy hahatakatra ireo ray aman-dreniny sy ireo fotoan-tsarotra nolalovan'ny andian-taranaka nisy azy ireo taorian'ny Ady Lehibe faha-2, fony teo ambanin'ny lalàna miaramila ny nosy ary matetika tsy ampy hanin-kohanina ny vahoaka.
”Tena vitsivitsy ahitana ampahany kely amin'ny zava-drehetra io”, hoy i Tsai, mamonkona totohondry. ”Ary ampy tsara izany.”